ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး Quality ကောင်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလေးဆိုရင် PANTRA Beauty Lip Crayon လေး ရှိတယ်နော်!!! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး Quality ကောင်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလေးဆိုရင် PANTRA Beauty Lip Crayon လေး ရှိတယ်နော်!!!
ဒီတစ်ခေါက်တော့ Cosmetic Myanmar ပရိသတ်ကြီးအတွက် မကြာသေးမီက ထွက်ရှိထားတဲ့ Cosmetic လေးတစ်ခုအကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အဲဒီအမှတ်တံဆိပ်ကတော့ PANTRA Beauty လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Product လေးကတော့ Velvet Matte Lip Crayon လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
PANTRA Beauty အမှတ်တံဆိပ်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Velvet Matte Lip Crayon လေးများဟာ တစ်နေ့တာလုံး အလှမပျက်စေဘဲ နူးညံ့မှုကို​ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ PANTRA Beauty Lip Crayon လေးတွေကို ၇၈ဝဝကျပ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်လို့ ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာနဲ့ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီတစ်ချောင်းကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Velvet Matte Type အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့် ဆိုးလိုက်ရင် နှုတ်ခမ်းထက်မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အိအိလေး ခံစားရစေမှာပါ။ အရောင်ထွက်တိကျမှန်ကန်မှုရှိပြီး တစ်နေကုန်ကြာရှည်ခံလှပစေပါတယ်။ ဗီတာမင်အီးပါဝင်တဲ့အတွက် နှုတ်ခမ်းသားလေးများကို အာဟာရဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးပြီး Non-drying formula နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် ခြောက်ကပ်ကပ်ကြီး ခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နှုတ်ခမ်းနီတောင့်လေးကို လှည့်လိုက်ရုံနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလေးကို အလွယ်တကူ ဆိုးနိုင်မှာပါ။ ရွေးချယ်စရာ Shade (၅)မျိုးကို ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
#02 Sweet Soul
#03 She Rules
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အရောင်လေးများကို casual daily makeup အဖြစ် နေ့စဉ်အသုံးပြု ပေးနိုင်ပါတယ်။
PANTRA Beauty အမှတ်တံဆိပ် နှုတ်ခမ်းနီလေးများကို ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Beauty Diary နဲ့ အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာရှိတဲ့ Cosmetic အရောင်းဆိုင် အတော်များများမှာ ဝယ်ယူလို့ရနိုင်နေပါပြီ။ ဒီတော့ PANTRA Beauty နှုတ်ခမ်းနီလေးဆိုးပြီး ချိုမြိန်စွဲမက်ဖွယ်နှုတ်ခမ်းလေးများကို ဖန်တီးလိုက်ကြပါစို့နော်။
Image Source – web.facebook.com/PantraBeauty/